Fikarohana fakantsary mpitsikilo valizy miafina valizy (SPY009) | Vahaolana OMG
Hidden Spy Pocket Pen Video Camera (SPY009)
Pocket Video Pen Camera - HD 720P Mini Hidden Camera Spy Pen, Camera amin'ny vatana miaraka amin'ny Audio and Voice Recorder, miampy 5 ora fandraisam-peo ho an'ny polisy, mpanao famotorana tsy miankina ary asa miafina
Tsara Designed Spy Camera Pen: Toa penina rehefa apetrakao ao am-paosinao, fa tsy hisy hahafantatra fa fakan-tsary izany. Ny cam body body portable dia mifanaraka tsara amin'ny tananao, ny paosinao, na ny vatasarihana. Kely izy io mba hiafina na aiza na aiza, ary natao manokana ho an'ny firaketana ataon'ny polisy na fanadihadiana miafina.
Superior Video sy Sound Quality: Ny fakan-tsary vidin'ny pocket dia mamoaka lahatsary avo lenta 1280 * 720P. Miaraka amin'ny mikrô amin'ny atiny, dia miasa tsara ihany koa izy io ho toy ny mpamoaka feo. Mandritra ny fandraisam-peo tsy tapaka, dia mitahiry rakitra horonan-tsary ao amin'ny segondra 5-minitra izy io, ary misy tsipika misy daty isaky ny lahatahiry ho toy ny loharanon-kevitra amin'ny famerenana ny rakitra.
Fotoana mavesatra maharitra: Miaraka amin'ilay batterie 720mAh navadika, ny fakan-tsarimihetsika mpitsikilo dia manohana ny firaketana amin'ny ora 5 ora aorian'ny fiampangana feno. Manohana ihany koa ny firaketana sy famandrihana amin'ny fotoana iray ihany koa izy, mba hahafahanao mampiditra banky angovo avy any ivelany na fiantohana fiatoana mandritra ny fanoratana.
Tena mora ampiasaina: Tsindrio fotsiny ilay bokotra hanombohana sy hampiato ny firaketana. Ity no plug-in tsara indrindra ary milalao mpitsikilo fitsikilovana eny an-tsena. Ampidino tsotra izao ny penina mpitsikilo ao amin'ny solosainao miaraka amin'ny kabone USB efa voavolavola, ary avereno jerena ny sarinao. Tena mora ampiasain'ny ankizy izany.
Hidden Spy Pocket Pen Video Camera (SPY009) no farany niova: Oktobra 9th, 2019 by Admin
6054 Total Views 5 Views Today